IHyro: Umhleli we-HTML5 OpenSource ngokubuka kuqala | Kusuka kuLinux
Usuvele ungene KusukaLinux sike sakhuluma ngabahleli ngaphambilini I-HTML5, CSS3 y JS, izibonelo zalokhu yilezi Abakaki, I-SublimeText, futhi Okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Namuhla ngikulethela izindaba ezimnandi zabaphathi bewebhu. Kuvela ukuthi manje sesihlanganiswe nelinye ilungu elisha lomndeni: IHyro, omunye umhleli onezici ezithakazelisa kakhulu.
Mhlawumbe ikhwalithi evelele kakhulu ku- IHyro Kungukuhlola kuqala esikutholayo lapho sifaka ikhodi, ifilosofi efana kakhulu naleyo esetshenziswe Abakaki con I-Node.js.
Enye yezinzuzo zayo ukuthi i-cross-platform, ngakho-ke singayilanda ngeWindows, OSX kanye ne- I-GNU / Linux kusuka kuwebhusayithi yabo (jawerty.github.io/Hyro/).
Ukala uzungeze I-29 Mb, futhi esimweni se- I-GNU / Linux singafaka ifayela le- .deb ongasinika zona kusayithi lakho. Uma ungumsebenzisi we-ArchLinux, ungasebenzisa i-Yaourt:
Uma usebenzisa Ama-64 Bits, kufanele uvule amakhosombe I-Multilib, kepha kungenzeka ukuthi ngeke isebenze kahle.
Umqambi wayo ezindabeni zeGitHub, ubuze ukuthi ngabe kukhona yini umuntu onentshisekelo yokuyihlanganisela amaBits angama-64, ngakho-ke uma ufuna ukusebenzisana, uyazi.
Qhathaniswa Abakaki o I-SublimeText, IHyro Kube ngumbhalo omncane futhi olula kanye nomhleli we-HTML, yize kuyenzeka ngokwezifiso ngokwemibala yokubukeka kwayo, kepha ayinakho okunye ukusebenza lokhu okushiwo ngenhla okusinikeza khona.
Ngokwamazwi ombhali uqobo:
Sekukonke, uhlelo lokusebenza lweHyro luyithuluzi lokuthuthuka elingasindi engilenzele ukuhlola isikhombimsebenzisi esisheshayo futhi esilula. Akuhloselwe ukuba umphelelisi ogcwele kuMbhalo Ophakeme kanye neVim, kepha uma uyisebenzisela lezi zinhloso, lokho kulungile.
Kepha njengoba ngishilo ekuqaleni, kuyizindaba ezinhle ukuthi sibe nenye enye indlela. Ngisalanda ukuncika kokukufaka kuma-Arch 64 Bits ami, kepha lapho nje ngenza, uzobona ukubuyekeza ku- Imizuzu eyi-10 nge-FromLinux.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IHyro: Isihleli se-OpenSource se-HTML5 esinokubuka kuqala
Inketho enentshisekelo, ngethemba ukuthi ilula ukwedlula Abakaki!
Kukhanya mhlawumbe, kunamandla amakhulu angicabangi kanjalo. 😉
Kubukeka i-xD embi kabi
THULA UPHETHE UKUCHAZA KWAMI!
Ngokuzimisela, kungumhleli wokuqala ukuthola i-hype yokuzama.
ihora nesigamu ukuhlanganisa nokufaka ku-manjaro, kuyamangalisa.
Ihora nengxenye? Halala .. ngichithe cishe amahora ama-5 izolo futhi angikaqedi ..
Ngafaka ama-Brackets ku-Debian yami futhi ngeke ivuleke, angazi ukuthi kungaba yini, kubukeka njengokuvula bese kungaphumi lutho. : /
Faka i-PPA enikezwe abantu beWebupd8 noma ufake kabusha, mhlawumbe ezinye izinciphiso azikho: Sudo apt-get install -f
Enye into, kwenzeka into efanayo kimi, kepha bekuyisimangaliso lapho ngisebenzisa ukubuka bukhoma ngisebenzisa i-Chrome (hhayi iChromium -_- ') futhi, kusukela lapho angikaze ngiyizame futhi, kuphela ngaphansi kwamawindi amanye amathuluzi Ngisebenzisa le OS futhi, ngendlela, ngiyaqhubeka nokusebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza engizisebenzise ku-Ubuntu.
Ngikuthola kuthakazelisa kakhulu 😀
Mina, iqiniso, ukuthi i-HTML5 angikafinyeleli entanyeni, nokho, kepha ngizoba nentshisekelo yokwenza kanjalo ngokuzayo. Ngike ngenza ikhasi lewebhu nge-css ne-html, kepha njengomkhuba wezifundo futhi ngaphandle kokupholisha kakhulu. Ukuthi ungabona ngqo okwenzayo ngomugqa ngamunye owufakayo, kuhle kakhulu.
Ngangikujwayela ukuhlela kuJava, ukuthi ngaphandle kokuthi ufake i-plugin, konke kunekhodi ngokuphelele, futhi uzokubona lapho uqeda i-xD kuyindaba yokusetha, kepha ukuba nefasitela eduze kwayo, impela kukhululekile.
Nami ngibe yisikhathi eside futhi kubonakala sengathi akuyeki ukulanda ukuncika ... Kepha kubonakala sengathi kuzokufanele i-xD
Kuleso simo ngincamela Abakaki Nombhalo Ophakeme 2: D!
I-PS: Ngilayishe isifaki seWindows futhi "sishayeka", ngisebenzisa i-W8.1 - Uma omunye umuntu enezinkinga ezinhlelweni zeWindows, ngazise kumazwana, ngokuqondene nephakethe le-Deb, ngilifakile ku-Ubuntu 12.04 futhi lisebenza kakhulu Yebo, lokhu kusebenza akusweleki kepha kwizisekelo kungaphezu kokwanele: D!
Ngisanda kuyifaka ku-Arch, ngakho-ke kungekudala ngizofaka isibuyekezo ngemizuzu eyi-10. Fromlinux.net 😀
Kuyihlazo elingakanani ekuqaleni kuka-2014 isoftware engama-32 ukuthi isakhiwa ngaphandle kwezinguqulo ezingama-64, akunjalo?
I-AMD yethule ukwakhiwa kwe-64-bit eminyakeni eyi-10 eyedlule kanti abanye abantu bangaphambi komlando basahlanganiswa ngama-32-bit.
Ndoda, ngine-HP Workstation yami yango-2006 eyi-32-bit kuphela, futhi anginasikhalazo ngayo. Inkinga ukuthi, abantu abaningi abazi ukuthi bangakuthola kanjani okuningi kuzakhiwo ezingama-64-bit.
Inketho enentshisekelo yize isadinga ukuvuthwa, yize lezi zinketho zingatholakali ngendlela efanayo kuKomodo Hlela 8.5. Kungakuhle ukubuyekezwa kwaleli thuluzi good lihle kakhulu ikakhulukazi kuwebhu ...
Empeleni nginakho ukufakelwe lokho .. Ngizobona ngokushesha nje lapho ngithola isikhathi ..
I-WideLands, umdlalo wecebo othakazelisayo ugxile ekwakhiweni hhayi ekubhubhiseni